နှစ်ပါတ်လောက်သုံးတာနဲ့ ကြည်လင်ဝင်းပစေလာမယ့် best seller serum လေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » နှစ်ပါတ်လောက်သုံးတာနဲ့ ကြည်လင်ဝင်းပစေလာမယ့် best seller serum လေး
အချစ်တို့ရေ မိန်းကလေးတွေက အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် မိတ်ကပ်တွေ အများကြီးလိမ်းကြတာထက် skincare တွေကို ဂရုတစ်စိုက်နဲ့ လုပ်လာကြတယ်။ မိတ်ကပ်ဆိုလှည့်တောင်မကြည့်ချင်ကြတော့လောက်အောင်ဖြစ်နေပြီ။ Skin တွေ အရမ်းကဲချင်နေကြတယ်ဆိုတာ မင်မင်ကသိနေတယ်လေ။ အဲ့တော့အချစ်တို့အတွက် သတင်းပေးနိုင်အောင် မင်မင်လည်းရှာဖွေရတော့တာပေါ့။ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေဆိုရင် မျှဝေပေးရတယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ။
အခုပြောပြပေးချင်တာလေးကတော့ skincare ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုသုံးချင်သူလေးတွေအတွက် တကယ့်ကိုသိသာပြီးတော့ ရလဒ်က သိသာတဲ့ serum လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါ။ သူလေးကတော့ Estee Lauder Night Repair Serum လေးပါ။ Estee Lauder ကတော့ ခေတဲ့brand တစ်ခု မဟုတ်ဘူးဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမှာပါနော်။ ရေမွှေးတွေ ဖိနပ်တွေ တကယ့်ကို luxury အသုံးအဆောင်တွေကို ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး brand တစ်ခုပါ။ အခုလို skincare တွေကိုပါ ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ အိုကေပြီလေ။
ဒီ serum လေးကတော့ ပြောရရင် anti-aging (အရေးကြောင်း) အတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ရေးထားပေမယ့် တစ်ခြား သိသာတဲ့ ရလဒ်တွေကိုလည်းရတာမို့ ပြောပြပေးလိုက်ရတာပါ။ သူလေးကတော့ အသက် ၂၅ လောက်မှ သုံးသင့်တယ်လို့တော့ရေးထားပေမယ့် အလှအပကြိုက်သူအဖို့ နာမည်ကြီးနေတော့လည်းသုံးချင်မယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်နော်။
Serum လေးကို ညအိပ်ရာမဝင်ခင်လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်-
၁. မျက်နှာပေါ်က လိုင်းတွေအရေးကြောင်းတွေကို သက်သာစေတယ်
၂. မျက်နှာအသားရောင်ညစ်နေတာတွေ မည်းနေတာတွေကို ကြည်ကြည်လေးဖြစ်နေစေတယ်
၃. အမာရွတ်လေးတွေ ပါးလာမယ် ဝက်ခြံကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်လေးကိုပါးလားစေပြီးတော့မှိန်လာစေတယ်
၄. အသားရေခြောက်ခြင်းကို လျော့ပါးစေပြီးတော့ မျက်နှာလေးကိုစိုစိုအိအိလေးဖြစ်နေစေတာကတော့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေပေါ့နော်။
၁. စျေးနှုန်းပါ သူကဘူးကြီးတစ်ဘူးကို ဒေါ်လာစျေးလေးတက်တော့ တစ်သိန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ကြောက်စရာနော်
၂. သူကပြောရရင် ပြင်းတဲ့အမျိုးအစားလို့ပြောလို့ရပါတယ် လိမ်းပြီးနှစ်ပါတ်လောက်ကြာတာနဲ့အရမ်းသိသာလာပြီးတော့ . အသားရေကိုကြည်လာတာပါ။ ဒါ့ကြောင့်အသက်ငယ်တဲ့သူတွေမသုံးဖို့ပြောထားတာပါ။ အရေပြားကနုနေသေးတဲ့အချိန်မို့အရေပြားပါးသွားတာတွေဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
သူကအဝါရောင်အရည်ကြည်လေးတွေပါ။ လက်ပေါ်ကိုတင်လိုက်တာနဲ့တင် လျှောကျပြီးတော့ lightweight အရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသားထဲကိုလိမ်းလိုက်တာနဲ့စိမ့်ဝင်ပြီးတော့ လိမ်းထားမှန်းတောင်မသိသာပါဘူး။ ဒါလေးကတော့အားသာချက်လေးပေါ့နော်။
သုံးပုံသုံးနည်းလေးကတော့- လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အစက်ကလေး ၃ စက်လောက်ချပြီးတော့ အသာအယာ နှိပ်နယ်တဲ့ပုံလေးနဲ့လိမ်းပေးရမှာပါ။ အများကြီးသုံးစရာမလိုပါဘူးနော်။ ပျော်ပြီလေ ဟိဟိ
Size ကတော့2မျိုးရှိပါတယ်။ အရင်ဆုံး စလိမ်းချင်တဲ့သူလေးတွေကတော့ ဘူးသေးလေးကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘူးအကြီး ဝယ်ပြီးတော့မှ မတည့်ရင် နှမြောစရာကြီးလေ။
size သေးလေးတွေကတော့ online shop တော်တော်များများမှာ ခွဲရောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။7ml ဆိုတော့ ညတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တောင် တစ်လခွဲလောက်အသုံးခံပါတယ်။ မဆိုးဘူးလေးနော်။ စျေးကလည်းနှစ်သောင်းနီးပါးလောက်လေးဆိုတော့ တတ်နိုင်တဲ့ပမာဏလေးပါနော်။
ရလဒက်ကတော့ လုံးဝကို အံ့မခမ်း ဖြစ်လို့ best selle serum စာရင်းတောင်ဝင်သွားပြီနော်။ အချစ်တို့လည်း လက်နှေးနေလို့မရတော့ဘူး။